स्रजल र प्रिजा 'ती आँखामा' गायन प्रतियोगितामा उत्कृष्ट
काठमाडौं : केही समयअघि दिवंगत भएका बरिष्ठ गायक/संगीतकार प्रेमध्वज प्रधानप्रति श्रद्धासुमन अर्पण स्वरुपमा एशियन म्यूजिक प्रा.लि.ले प्रधानको गीतको कभर गायन प्रतियोगिता गरेको छ ।
दिवंगत गायक प्रधान र गायिका केन्जुमा सुब्बाको स्वरमा रहेको 'ती आँखामा' गीतको प्रतिस्पर्धामा स्रजल महर्जन र प्रिजा मिश्राको जोडी प्रथम भएको छ । यो प्रतियोगिताको फाइनलका लागि ११ जोडी गायक गायिका चयन भएका थिए । उनीहरु मध्येबाट निर्णायकमा अंकको आधारमा महर्जन र मिश्रको जोडी प्रथम भएको आयोजक संस्था एशियन म्युजिकका अध्यक्ष इश्वर गुरुङले बताएका छन् ।
बिजेता महर्जन र मिश्रले पुरस्कार स्वरुप युगल स्वरमा एउटा गीत रेकर्ड गर्न पाउने भएका छन् । उनीहरुको त्यो गीतको भिडियो पनि आयोजक संस्थाले निर्माण गर्ने भएको छ ।
यस्तै यो प्रतियोगितामा सुमित श्रेष्ठ र युनिशा शेर्पा देशारको जोडी द्वितीय भएको छ । द्वितीय जोडीले पुरस्कार स्वरुप युगल स्वरमा एउटा गीत आयोजक कम्पनीको तर्फबाट रेकर्ड गर्न पाउने भएका छन् । यो प्रतियोगिताको लागि देशभरबाट १७३ जोडीले आफ्नो स्वरमा गीत रेकर्ड गरेर भिडियो पठाएका थिए । जसमध्यबाट श्रजल र प्रिजा उत्कृष्ट भएका हुन् ।
६ वर्ष अघि रिलिज भएको यो गीतमा जुगल डँगोलको संगीत र डब्बु क्षत्रीको शब्द रहेको थियो । यो प्रतियोगिताका बिजेता र उत्कृष्ट ११ पर्न सफल प्रतिस्पर्धीलाई चाँडै काठमाडौंमा एक समारोह आयोजना गरेर प्रमाणपत्र प्रदान गरिने भएको छ । बिजेताहरुको स्वरमा गीत पनि चाँडै रेकर्ड गरिने भएको छ ।
यो कभर गायन प्रतियोगिताको निर्णायकमा यही गीतका गीतकार डब्बु क्षत्री, संगीतकार जुगल डँगोल र गायिका केन्जुमा सुब्बा रहेको थिए । यी तीन जनाको निर्णयक टीमले उत्कृष्ट गायक गायिका चयन गरेको हो ।
मान्छे एक प्रतिभा अनेक
काठमाडौं : गोेपाल ढकाल ‘छन्दे’ नेपाली कलाकारिता क्षेत्रको एउटा लोकप्रिय नाम हो । गोपाल लोकप्रिय कलाकार मात्रै होइनन्, हरेकलाई सहयोग गर्न तत्पर भैहाल्ने समाजसेवीका साथै असल व्यक्तित्व समेत हुन् ।
जीवन्त अभिनय गर्ने खुबी भएका कलाकार गोपालको पहिचान हास्यकलाकार नै हो । उनले अभिनय, गायन, लेखन बाहेक थुप्रै म्युजिक भिडियो, विज्ञापन तथा टेलिश्रृंखलाहरु निर्देशन गरिसकेका छन् ।
पश्चिम नेपालको गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत तनहुँ जिल्लाको भिमादमा पिता स्व. चुडामणी ढकाल र माता टेलुका माया ढकालको गर्भबाट सन् १९८६ फेब्रुअरी १८ मा कलाकार गोपालको जन्म भएको हो । उनी विगत १८ वर्षदेखि नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रमा निरन्तर सक्रिय छन् । विद्यालय जीवनदेखि नै अभिनयलाई जीवनको कर्म ठान्दै आएका उनले चर्चित हास्यकलाकार, गायक, अभिनेता, उद्घोषक, निर्देशक एवं लघुकथा लेखकका रुपमा आपm्नो परिचय स्थापित गरेका छन् ।
जीवनलाई सार्थक बनाउनका लागि इमान्दार, मेहेनती र नैतिकवान भएर आफूले रोजेको कर्ममा लाग्नुपर्छ भन्ने गोपाल हजारौँ स्टेज कार्यक्रमदेखि सडक नाटक, टेलीचलचित्र, ठूलो पर्दाका दर्जनौँ नेपाली कथानक चलचित्र लगायत युरोप, युकेका विभिन्न देशहरुमा साथै एसियाका आधा दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रहरुमा आफ्नो प्रस्तुति पस्किसकेका प्रतिभा हुन् ।
हास्यकलाकार, हास्यगायक गोपालले भारतीय राजदूतावासको छात्रवृत्तिमा भारतको पुणेमा अवस्थित फिल्म एण्ड टेलिभिजन इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एफटिआईआई)बाट अभिनयको विशिष्ट कोर्स पूरा गरेका छन् । कलाकारिता र कलाकर्मको दौरानमा बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्याण्डस, लग्जेमबर्ग, बेलायत, स्कटल्याण्ड, वेल्स, कतार, दुबई, मलेसिया, थाइल्याण्ड, लाओस जस्ता देशको भ्रमण गरिसकेका उनी एक परिपक्व, रसिक र भर्सटाइल व्यक्तित्व हुन् ।
कला, अभिनय, संगीत, गायन भनेपछि हुरुक्कै हुने गोपाल बाल्यकालदेखि नै अभिनयका पारखी थिए । उनी अनुभवी अभिनय प्रशिक्षक समेत हुन् । विभिन्न एफएम रेडियो, टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर आरजे, भिजेका रुपमा नाम कमाइसकेका उनी चर्चित उद्घोषक समेत हुन् भने एभर ग्रीन वल्र्डवाइड इन्टरटेन्टमेन्ट प्रा.लि.का निर्देशक पनि हुन् । उनले विभिन्न टिभी प्रोग्राम, हजारौँ स्टेज कार्यक्रम साथै दर्जनौँ टेलिभिजन च्यानलबाट लाइभ प्रस्तुति समेत दिइसकेका छन् । प्रायजसो निर्माता, निर्देशकको रोजाइमा पर्ने गोपाल प्रतिभावान् र महँगो पारिश्रमिक लिने कलाकारको रुपमा पनि पर्दछन् ।
गोपालले ‘फूलमा माहुरी’, ‘इन्डियामा जागिर खाको छु’, ‘कान्छी सानी छ’, ‘उडायो रेलैले ठाडो कपाल तोरिको तेलैले’, ‘झ्याप्पझ्याप्प लभ’, ‘धोती न टोपी’, ‘कालीगोरी’ लगायतका दर्जनौँ कमेडी गीतमा गायक, गीतकार, संगीतकार र मोडलका रुपमा स्थापित गर्नेे रेकर्ड समेत राखेका छन् । ‘टेन्सन साफ’ हास्य टेलिश्रृंखलाका लेखक तथा निर्देशक उनले ‘बुद्धको पाइला’, ‘हिजोआजका कुरा’, ‘तितो सत्य’, ‘गीतान्जली’, ‘भद्रगोल’, ‘परिचय’, ‘मेरी बास्सै’, ‘बाउन्न घुस्सा त्रिपन्न ठक्कर’, ‘घैँटामा घाम’, ‘ताइ न तुइ पारा उही’, ‘जालझेल’, ‘साहारा’, ‘राजश्री फिल्मी चक्कर’, ‘टेन टु फाइभ’, ‘ट्वाक्क टुक्क रिटन्र्स्’, ‘शेर्पा दाइ’, ‘दुईटी स्वास्नीको पोइ कुना पसी रोई’ जस्ता अनेकौँ टेलिफल्म तथा भिडियो फिल्ममा अभिनयका साथै लेखन निर्देशन समेत गरेका छन् ।
कमर्शियल विज्ञापनको क्षेत्रमा समेत उनको अभिनय अझै रोचक देखिन्छ अर्थात व्यावसायिक धारका प्रतिष्ठित कम्पनीहरुले उनलाई अत्यन्तै विश्वास गरिएको पाइन्छ । बेस्ट टेलिभिजन कमर्शियल अवार्ड प्राप्त गर्न सफल शालिमार सिमेन्टको ब्राण्ड एम्बास्डर रहेका गोपालले शालिमार सिमेन्टका धेरै विज्ञापनहरु, वाइ वाइ ५०—५० चाउचाउ, बोनस चाउचाउ, डन साबुन, इको रुफिङ्ग, अनुपम पेलेट दाना, मनकामना मनि एक्सप्र्रेस, कान्तिपुर मल, भोटाहिटी जुत्ता बजार, हट्के झड्के झालमुडी, ज्योति बजार सपिङ मल लगायत अनेकौँ कमर्शियल टिभिसी विज्ञापनहरुमा आफ्नो व्यावसायिक अभिनय पस्किसकेका छन् ।
नेपाली सिने जगतका चर्चित चलचित्रहरु सावधान, ‘भाइमारा, विष,दाइको ससुराली, दानवीर, देशदेखि विदेश, हात लाग्यो शून्य, इशारा, जंगबाज, जुत्ता खाने बुहारी, खोज, मन परेपछि, नमस्ते, पहिलो पहिलो माया, नमस्ते नेपाल, पर्खीबसेँ, सपनाको नौलो संसार, वडा नं छ ,युद्ध, लभ यु हमेशा, पोइ प¥यो काले आदिमा अभिनय गरेका हास्यकलाकार गोपाल मिलनसार एवं सहयोगी पनि छन् ।
विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध गोपालले कोभिड–१९ महामारीको समयमा असहाय, दुखी, पीडित व्यक्तिहरुलाई राहत वितरण गरी सामाजिक काम पनि गरेका छन् ।
नेपाली, हिन्दी, अंग्रेजी भाषामा पारंगत उनको मूल पहिचान हास्यकलाकार भएपनि उनको चरित्र निर्वाह बहुआयमिक, भर्सटाइल र अत्यन्तै प्रभावशाली पाइन्छ । देश, विदेशका विभिन्न अवार्डहरु, सम्मानहरुबाट सम्मानित उनी बेस्ट कमेडियन आर्टिस्टका रुपमा सुपरिचित छन् । हाल हिमालय टेलिभिजन एच.डीबाट प्रशारण भैरहेको हास्य टेलीचलचित्र डन्ट माइन्ड, टेन्सन साफ सिरियलको प्रमुख कलाकारको रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
अनेक कोणबाट हेर्दा उनी साँच्चै बहुमुखी प्रतिभा हुन् । नेपाली कला जगतमा निरन्तर लागिपरेका गोपाल एक उदाहरणीय व्यक्तित्व हुन् । भर्खरै स्वास्थ्यकर्मी सिकृता वस्तीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएका गोपाल लोकप्रिय हास्यश्रृंखला तितो सत्यमा अभिनय गर्दा छन्देको उपनामले दर्शकमाझ लोकप्रिय भएका थिए ।
रत्न डंगोलको अभिनयमा ‘जिन्दगीले घुमायो’ सार्वजनिक
काठमाडौं : रत्न डंगोलको अभिनय रहेको गीत ‘जिन्दगीले घुमायो’ सार्वजनिक भएको छ । युवा गायक जोसेफ शाही ठकुरी र भ्वइस अफ नेपालका प्रतिस्पर्धी धर्मेन्द्र सुनारको युगल गायनमा रहेको गीत ‘जिन्दगीले घुमायो’को भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
जोसेफ शाही अफिसियल युट्युव च्यानलमार्फत गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । सर्वश्व गुमाएर पनि जिउने आत्मबल नगुमाएको एक्लो पात्रको काहानी समेटिएको गीतको भिडियोमा डंगोलसँगै राजिन आचार्य, रामबाबु रेग्मी र रचना गौतमको अभिनय रहेको छ । सिम भन्ज्यांगलगायतका विभिन्न स्थानमा छायाँकन गरिएको भिडियोमा गौरव गिरीको निर्देशन छ ।
जोसेफको नै शब्द, करणराज कार्कीको संगीत र देबेश राइको संगीत संयोजन रहेको गीत ए वन म्युजिसियन स्टडीयोमा रेकर्ड गरिएको हो भने ध्वनी सम्पादन किशोर थापाको छ । बसन्त कुँवरको छायाँकन, बलभद्र कुँवरको सम्पादन रहेको गीतको भिडियोमा श्याम कुँवरको रंग संयोजन छ ।
चेम्जोङको ‘एकलौटी बजार’
काठमाडौं : गीतकार इन्दिरा चेम्जोङको ‘एकलौटी बजार’ बोलको नयाँ गीत भिडियोसहित सार्वजनिक भएको छ । नेपालको पुर्वी धनकुटा जिल्ला, चौबिसे राजारानीमा जन्मिएकी गीतकार इन्दिरा चेम्जोङ नेपाली सांगीतिक आकासका गीति लेखनमा एक सशक्त नारी हस्ताक्षर हुन् ।
उनले यसअघि पनि ‘अर्को जन्म’ बोलको एल्बमका साथै नेपाली तथा लिम्बु भाषी गरी धेरै गीतहरु सांगीतिक बजारमा स्रोता, दर्शक सामु पस्किसकेकी छन् । गीतकार चेम्जोङले न्युयोर्क अमेरिकाको प्रवास बसाईमा रहँदै बजारमा ल्याएको उक्त ‘अर्को जन्म’ एल्बमले धेरै स्रोता दर्शकहरुको मन जित्न सफल भएर माया पाएको थियो ।
‘एकलौटी बजार’ मा बाबुल गिरीको संगीत तथा एरेन्ज र गायक आभास क्षेत्रीको आवाज रहेको छ भने सम्पादन विश्व भण्डारीको रहेको छ । इन्दिरा चेम्जोङ नामक अफिसयल युट्युब च्यानलबाट बजारमा सार्बजनिक भएको ‘एकलौटी बजार’ बोलको भिडियोसहितको प्रेमील बियोगान्त गीतले पनि आम स्रोता, दर्शकको मन जित्न सफल हुनेछ भन्ने कुरामा विस्वास रहेको उनले बताएकी छन् ।
ड्रिम हाई नेपालले मिडिया अवार्ड गर्ने
काठमाडौं : विभिन्न ठुला इभेन्ट गर्दै आइरहेको ड्रिमहाई नेपालले ‘मिडिया अवार्ड’ गर्ने भएको छ । नेपालको मिडिया क्षेत्रमा देखिइरहेका उत्तरचडावलाई मुल्यांकन गरी राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले मिडियाका विविध स्वरुप र विधालाई समेटेर ‘नेपाल मिडिया अवार्ड २०७८’ कार्यक्रम गर्न लागिएको संस्थाले जनाएकोे छ ।
रेडियो, टेलिभिजन, युट्युब, प्रिन्ट र अनलाइनका विविध विधालाई समेटी गरिने अवार्ड ‘सेलिब्रेटिङ्ग विथ चेन्जमेकर्स’ थिमका साथ कार्यक्रम हुन लागेको आयोजक ड्रिमहाई नेपालका अध्यक्ष कमल जिसीले जानकारी गराएका छन् । सञ्चारमाध्यमका मुख्य विधाको पहिचान गर्ने र त्यो विधामा उत्कृष्ट काम गरिरहेकाहरूको सूची तयार गरी मनोनयन सार्वजनिक गर्ने जिसीको भनाइ छ ।
यसरी मनोनयनमा परेका कार्यक्रम, प्रस्तोता वा समाचारलाई मिडिया क्षेत्रका विज्ञको निर्णायक टोलीले मूल्यांकन गरी विजेताको घोषणा गरिने आयोजकको भनाइ छ । नेपालमा मिडिया क्षेत्रलाई समेटेर पहिलोपटक अवार्ड हुन लागेको उनको भनाइ छ । सन् २०१८ मा स्थापना भएको ड्रिम हाई नेपालले यस अघि नेपथ्य कन्सर्ट, अनमोल इभेन्ट लगायत केही समय पहिले ‘नेफ्टा’ अवार्ड आयोजना गरेको थियो ।
मौलिक तीज गीत ‘स्यानी’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं : नेपालमा हरेक चाडपर्वलाई लक्षित गरेर विभिन्न किसिमका गीत संगीतको निर्माण हुने गरेको छ । संगीत बिनाका कुनै पनि पर्व हुँदैनन् र छैनन् पनि । यस्तै महिलाहरूको पवित्र पर्व हरितालिका तीज आउन करिब एक महिना बाँकी रहेको छ । यही पर्वको अवसरलाई लक्षित गर्दै दैनिक नयाँ नयाँ गीत संगीतहरू बजारमा आइरहेका छन् ।
तीजमा माइत आउँदा आफूले घर देशमा पाएको दुःख पीडालाई गीत मार्फत अभिव्यक्त गर्ने संस्कार तथा प्रचलन यस पर्वले बोकेको छ । तर पछिल्लो समय तीजलाई रत्यौलीले गाजी रहेको छ । तीज र रत्यौली बीच निकै ठुलो बहस चलिरहेका बेला मौलिक तीज गीत ‘स्यानी’ सार्वजनिक भएको छ ।
विक्रम परियार र अमृता श्रीपालको स्वरमा सजिएको स्यानीका शब्द शरद पाण्डेले लेखेका हुन् भने प्रेम सापकोटा ‘सोनु’ ले संगीत भरेका छन् । आफ्नो स्यानीलाई अत्यधिक माया गर्ने स्यानेले स्यानीको नृत्य कौसलताको र रूपको बयान गीतमा गरेका छन् । पछिल्लो समय तीज गीतमा विकृति आउन थालेको भन्ने चर्चा चलिरहँदा यो गीतमा भने अश्लीलताको प्रयोग गरिएको छैन ।
आफ्नो प्रेमीको जितको लागी हार पनि स्वीकार्नु पर्ने सन्देश गीतले दिएको छ । मरक्क कम्मर मर्काएर नाच्न खप्पिस स्याने र स्यानीको चरित्रमा अर्जुन सापकोटा, विमल अधिकारी, रविना भण्डारी, सन्ध्या सानुलाई प्रवीण थापाले आफ्नो कोरियोग्राफी तथा निर्देशन मार्फत नचाएका छन् । सुजन कोइरालाले सम्पादन गरेको भिडियोलाई वीरेन्द्र भट्टले खिचेका हुन् । नवराज भट्टराई र तिलु शर्मा पौडेलले मिलेर स्यानीको निर्माण गरेका हुन् ।
‘कलामा ब्यापार हुँदैन भन्ने कुरा हामीले भुल्न हुँदैन’
नुवाकोटको बेलकोटमा जन्मेहुर्केकी अहिलेकी लोकप्रिय गायिका सरस्वती उप्रेती लोक दोहरी गीतसंगीतको क्षेत्रमा चिनाइरहनु पर्ने नाम होइन । लामो संघर्ष, पूर्ण लोक गीत संगीतकको यात्रासँगै समस्त नेपाली मौलिक सांस्कृतिक झल्किने लोक दोहरी गीत दर्शक श्रोताहरु माझ आफ्नो सुरिलो स्वर प्रस्तुत गरेर मन जित्न सफल गायिका सरस्वती उप्रेतीले झण्डै दुई सयको हाराहारीमा लाइभ दोहरी गाइसकेकी छन् । कक्षा ७ अध्ययनताका स्कुलको वार्षिक उत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा उनले गाएको ‘छोरीलाई स्कुल पठाइदेउ’ बोलको सन्देशमुलक गीतले प्रथम पुरस्कार हात पारेको थियो । उनकै शब्द रचना रहेको ‘आएपछि काल नजिक घुमेर’ बोलको गीतले अत्याधिक सफता पायो । लोकदोहरीको क्षेत्रमा पृथक पहिचान बनाउन सफल गायिका सरस्वती उप्रेतीले नारी पर्व नजिकिँदै गर्दा गत साता तीज गीत ‘सुनको चुरा’ भिडियोसहित सार्वजनिक गरेकी छन् । लोक दोहरी गीतसंगीतको क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहने अठोट लिएकी मिठो स्वरकी गायिका सरस्वती उप्रेतीले मध्यान्ह दैनिकका लागि सानु श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीः
नारी पर्व तीज नजिकिँदै छ दर्शक, श्रोताका लागि के कोसेली ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
भगवानरुपी दर्शक, श्रोताहरुलाई मैले यो वर्ष तीज गीत सुनको चुरा पस्केकी छु ।
कहिलेदेखि गायनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ ?
मलाई यस क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा मेरा बाबा, आमाबाट भएकाले विद्यालय समयदेखि नै यस क्षेत्रमा समर्पित छु ।
पछिल्लो समय नेपाली सांगीतिक क्षेत्रको स्वरूपमा परिवर्तन देखिएको छ भन्छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ?
सबैको सोच आ–आफ्नै हुन्छ कस्ले के भन्छ भन्दा पनि मैले के गरें भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
सीडी क्यासेटको बिक्री वितरण बन्द नै भयो, केका लागि गाउनु हुन्छ ?
गायनको कुरा गर्दा मलाई लाग्छ सीडी, क्यासेट एउटा दर्शक श्रोता माझ पु¥याउने साधनमात्र हो, साध्य होइन । सीडी क्यासेटले मात्र गीत चल्ने भए आज पनि वालन, देउडा जस्ता गीत चल्तिमा छँदैछ ।
संगीतको व्यावसायिक स्थिति धरापमा परेको छ जस्तो लाग्दैन ?
व्यवसाय अर्थात पैसामा किन बेच गर्ने कुरा होला तर कलामा ब्यापार हुँदैन भन्ने कुरा हामीले भुल्न हुँदैन ।
अहिलेको पुस्ताले नेपाली गीतसंगीत प्रति रुची नदेखाउनुको कारण के होला ?
पुरानो र नयाँमा सांगीतिक तालमेल र शब्द चयनमा पनि केही फरकपन देखिएकाले होला जस्तो लाग्छ ।
देशविदेशमा हुने लाइभ म्युजिक कार्यक्रममा तपाईंको डिमाण्ड कत्तिको हुन्छ ?
नेपालमा मेरो लाइभ दोहरी १५० भन्दा बढी छन् त्यसमै तपाईंले अन्दाज लगाउन सक्नु हुन्छ । तर, विदेशमा कार्यक्रमका लागि गएकी छैन ।
गीतसंगीत भनेको मनोरञ्जनकै लागिमात्र हो कि समाजमा सन्देश पनि दिने खालको हुनुपर्छ ?
गीतसंगीत एक प्रकारले भन्ने हो भने हरेक ब्यक्तिको नशा, नशामा हुन्छ तब त मनोरञ्जन र सन्देशको कुरा उठ्छ ।
आजकलका गीतहरूमा भारतीय म्युजिकको बिट र तालहरूको फ्युजन भएको पाइन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
आजमात्र होइन परापुर्व कालदेखि नै नेपाली र भारतीय सांगीतिक संस्कृती मिलेका कुराहरु सबैमा अवगत नै छ । कति अग्रज कलाकारहरु नेपाली भएर पनि भारतलाई नै कर्मथलो बनाइरहेकाले उनको प्रभावले गर्दा त्यस्तो देखिएको जस्तो लाग्छ ।
डिजिटल प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण गायक, गायिकाले पहिलेको जस्तो मिहेनत गर्दैनन भन्छन् नि ?
यो सबै समय र प्रविधिको उच्चतम् प्रयोगलाई मिहेनत नगरेको भन्न मिल्दैन ।
कस्तो खालको गीतसंगीतले बजार तताउँछ ?
गीतसंगीत भनेको साउनको भेल जस्तै हो । कति बेला कस्तो खाले गीतसंगीतलाई दर्शक, श्रोताले रुचाउनु हुन्छ भन्न सक्ने स्थिति नेपालमा आइसकेको छैन ।
तपाईं आफु चाही कस्तो गीतसंगीत सुन्न मन पराउनुहुन्छ ?
म औशतका गीतहरु नै सुन्छु ।
अहिलेका युवा पुस्ताले मौलिकता भुल्दैछन् भन्छन् किन होला ?
मानव स्वभाव नै परिवर्तनाशील हुन्छ । मुर्चुङ्गा, विनायो, सारङ्गीमा रमाउने हामी अहिले गिटार र ड्रमसेटमा रमाउन थालेका छौं । शब्दमा पनि सकेसम्म छोटो र छिटो बनाउन थालेका छौं, त्यसैले होला जस्तो लाग्छ ।
नेपाली गीतसंगीतमा पहिलेको जस्तो स्रोता नहुनुको कारण ?
त्यसो होइन, दर्शक श्रोता नभएको भए अहिलेको समयमा हामी गीतसंगीतका कुनै कलाकार नै हुँदैनथ्यौं र भीड नदेखिनुमा प्रविधिले गर्दा जस्तो लाग्छ ।
गीतसंगीतमा लगानी गर्नु भनेको बालुवामा पानी भन्ने थाहा हुँदाहँुदै लगानी गर्न छाड्दैनन् किन ?
गीतसंगीत भनेको मैले अघि पनि भनिसकें सबैको नशा, नशामा बगिरहन्छ । झन कलाकारहरु त त्यो नशामा समाहित भएका हुन्छन् त्यस्तो बेलामा लगानी बालुवामा भएनि मृग मिरिचि भने झैं हो जस्तो लाग्छ ।
पछिल्लो समय गीतसंगीतमा छाडापन बढेको हो ?
पछिल्लो वा पहिलो भन्ने केही छैन । तर केही कलाकार साथीहरुले आफुलाई भन्दा पनि गीतसंगीतलाई द्विअर्थी लाग्ने शब्द दिएकाले त्यस्तो भनिए जस्तो लाग्छ ।
गायन क्षेत्रबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
गायन क्षेत्र भनेको सिमसार क्षेत्रको मुल जस्तै हो यसलाई रोक्छु या छेक्छु भनेर पनि सकिने कुरा होइन । तर समग्र प्रस्तुतिको हिसावले सन्तुष्ट छु ।
गायनबाहेक अरु के गर्नु हुन्छ ?
म कृषि प्रधान देशमा जन्मिएकी कृषककी छोरी । मैले ‘फ्रेसहिल एग्रो फर्म’ नामक कृषि फर्म सञ्चालन गरिरहेकी छु ।
मनमा लागेको केही भन्नु छ कि ?
यसैगरी गायन क्षेत्रमा निरन्तरता दिन सकियोस् । भविष्यमा एक छाक खानका लागि यस क्षेत्रबाट विस्थापित कुनै कलाकार हुन नपरोस् भन्न चाहन्छु र तपाईं लगायत लोकप्रिय दैनिक पत्रिका मध्यान्ह टिमलाई यो अवसरका लागि धन्यवाद ।
‘इच्छा र आफूमा खुवी भएमा धेरै कुरा सम्भव हुन्छ’
चलचित्र निर्माण, अभिनय र निर्देशनमा आफूलाई संलग्न गराउँदै आएकी छन् अभिनेत्री सुभेच्छा थापाले । कुनै समय ‘बोल्ड नायिका’को रुपमा चर्चामा रहेकी शुभेच्छा नाम र दामका लागि आफू सफल भएको बताउँछिन् । चलचित्र ‘लक्ष्मी रानी’बाट निर्देशनमा डेब्यू गरेकी उनले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा झण्डै दुई दशक बिताइसकेकी छन् । उनले कलाकारिताको सुरुवात रंगमञ्चबाट शुरु गरेकी हुन् । बद्री अधिकारीको टेलिशृंखला ‘सहयात्री’बाट उनको औपचारिक कलाकारिता शुरु भएको हो भने नायिकाको भुूमिकामा अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र ‘ध्रुव’ हो । त्यस्तै उनले लेखनमा पनि आफूलाई संलग्न गराउँदै आएकी छन् । सबै विधातर्फ संलग्न रहेकी उनी बहुप्रतिभाकी धनी रहेकी छन् । शुभेच्छाले आधा दर्जन चलचित्र निर्माण गरेकी छन् भने दर्जनौं चलचित्रमा अभिनय गरेकी छन् । उनी सबैको रोजाइमा पर्न सफल अभिनेत्री हुन् भने महँगो परिश्रमिक पनि लिने गर्छिन् । यतिबेला नयाँ चलचित्रका लागि तयारीमा रहेकी उनी कोरोना संक्रमणका कारण केही ढिला भएको बताउँछिन् । उनै नेपाली चलचित्रकी लोकप्रिय नायिका शुभेच्छासँग मध्यान्न दैनिकका लागि प्रतिक्षा गौतमले गरेको कुराकानी :
तपाईं हामी सबै यतिबेला कोरोना संक्रमणका कारण आफूलाई सुरक्षित राख्दै काम गर्नु पर्ने अवस्थामा छौं । म पनि सुरक्षाका मापदण्डलाई ख्याल गर्दै केही म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिरहेकी छु । केही सिरियलमा पनि काम गरिरहेको छु । यस्तै हरेक हप्ताको शनिबार आउने पारिवारिक सिरियल ‘कुल खानदान’मा पनि अभिनय गरिरहेकी छु । यसको राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ । यतिबेला यसको ८८ भाग दर्शकमाझ आइसकेको छ । म निरन्तर छु यसमा । यस्तै कोरोना कहरबीच मैले आफ्नो चलचित्र ‘लक्ष्मी रानी’ युट्युबमा सार्वजनिक गरें । अहिले नयाँ प्रोजेक्टको तयारी गर्दैछु । त्यसको काम भइरहेको छ । तर, यो कोरोना संक्रमणका कारण फ्लोरमा जान भने सकेको छैन । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि एक मात्र उपाय भनेको यसका विरुद्ध लगाइएको खोप नै हो । यति बेला खोप लगाउने कार्य भइरहेको छ आशा छ छिट्टै नै सहज वातावरण हुने छौं र हामी फेरि छिट्टै नै ठूलो पर्दाको ‘एक्सन कट’मा सहभागी हुने छौ । यस्तै यो बीचमा मैले केही समाजिक कार्यमा पनि आफूलाई ब्यस्त बनाउँदै आइरहेकी छु ।
नेपाली कला क्षेत्रमा यहाँको प्रवेश कसरी भयो, किन आउनुभयो यो क्षेत्रमा ?
म कला क्षेत्र भनेपछि सानैदेखि नै हुरुक्क हुन्थें । यसमा सानैदेखि लागेकी हुँ म । मेरो आमा गीत संगीत र चलचित्रलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो । मेरो आमाको प्रेरणाले नै म यो क्षेत्रमा आएँ ।
रंगमञ्चबाट कलाकारिताको यात्रा सुरुवात गर्नुभयो होइन ?
हो, मैले मेरो कलाकारिताको सुरुवात रंगमञ्चबाट शुरु गरेकी हुँ । बद्री अधिकारीको टेलिशृंखला ‘सहयात्री’बाट मेरो औपचारिक कलाकारिता शुरु भएको हो । मैले नायिकाको भूमिकामा अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र ‘ध्रुव’ हो ।
यहाँले अभिनयसँगसँगै चलचित्र निर्माणमा पनि हात हाल्नुभयो, निर्देशनमा पनि हुनुहुन्छ होइन ?
मलाई के लाग्छ यी सबै यही क्षेत्रका विभिन्न पाटा हुन् । म यही क्षेत्रमा छु । यो क्षेत्रबाट अलग भएकी होइन । यो सबै एक अर्कासँग सम्बिन्धित काम नै हुन् । आफूले जानेको, आफूले बुझेको कुरा किन दर्शकमाझ न पस्किने भनेर हात हालेकी हुँ । मैले ६ वटा फिल्म निर्माण गरेँ, त्यसपछि निर्देशन गर्न थालेकी हुँ । अभिनय र निर्माण गर्दै जाँदा निर्देशन पनि गर्न सक्छु भनेर थालेकी हुँ ।
तपाईंको बोल्ड अभिनयले वाहीवाही बटुल्न सफल थियो भने निर्देशनमा दर्शकको कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
म यो क्षेत्रमा बोल्ड नायिकाको रुपमा परिचित रहें । सबैको तारिफले ममा अझ आत्मविश्वास बढ्दै गयो । मैले निर्माण गरेका चलचित्रमा प्रायः सोसियल विषय रहेका छन् । मैले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘लक्ष्मी रानी’ पनि सोसियल चलचित्र नै हो । दर्शक र समाजबाट पनि राम्रै प्रतिक्रिया पाएँ, पाइरहेकी छु । यो चलचित्र ‘लक्ष्मी रानी’बाट पाएको माया, सकरात्मक प्रतिक्रिया, उत्साहले नै अर्को चलचित्र निर्देशन गर्न लागेकी छु ।
थुप्रै चलचित्रमा अभिनय गर्नुभयो, लेखन कार्यतिर लाग्नुभएको छ भने चलचित्र निर्देशन पनि गर्नुभयो, निर्देशन गर्ने सोच कसरी आयो ?
लामो समयसम्म यो क्षेत्रमा रहेकी म आफैँ अझ राम्रो निर्देशन किन नगर्ने भनेरे लागें । तपाईंले भने जस्तै चलचित्र लेखनमा पनि आफूलाई संलग्न गराएकी छु ।
धेरै विधातर्फ संलग्न हुनुहुन्छ, सबै विधातर्फ हात हाल्दा कसरी सम्भव हुन्छ ?
मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा ठूलो कुरा मानिसको इच्छा रहेछ । इच्छा र आफूमा खुवी भएमा धेरै कुरा सम्भव हुन्छ । फेरि एउटै कामका विविध पाटा हुन यी सबै । हामीले साढे दुई घण्टादेखि तीन घण्टा पर्दामा जुन दृश्य देख्छौं त्यो निर्माण गर्नु आफैँमा गाह्रो हो । मैले आफूले निर्देशन गरेको चलचित्रमा अभिनय गरेको छैन । चलचित्रमा निर्देशनको ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ । मैले नयाँ कलाकारहरुलाई अवसर दिने गरेकी छु ।
कतिको गाह्रो रहेछ यो ‘एक्सन कट’, कति जनालाई अवसर दिनुभयो अहिलेसम्म आउँदा ?
आफ्नो काम हो, त्यस्तो गाह्रो लाग्दैन मलाई । आफ्नो पेशा हो, काम हो, पूजा हो । शुरुका दिनहरुमा अलिक अप्ठायारो लाग्थ्यो तर काम गर्दै जाँदा सिकिन्छ, सिक्दै जाने कुरा हो । धेरै हुनुहुन्छ । दुर्गेश थापालाई मैले नै चलचित्र ‘मखमली’बाट हिरोमा डेब्यू गराएकी हुँ ।
तपाईं आफैँलाई म सफल अभिनेत्री हो भन्ने लाग्छ ?
सफलता, असफलता केलाई भन्ने ? मैले अभिनय गरेका चलचित्रले राम्रै सफलता प्राप्त गर्दा निश्चय नै म सफल अभिनेत्री हुँ भन्ने लाग्छ । जसरी मैले अभिनय गरेका चलचित्र मार्फत दर्शकले मलाई बोल्ड अभिनेत्रीको रुपमा चिन्नुभयो, मेरो चर्चा भयो त्यो नै मेरो सफलता होइन र ? मैले दर्शकबाट अपार साथ, माया र हौसला पाएकी छु । यसले मलाई एक खालको सन्तुष्टि दिएको छ । मेरा चलचित्रले सफलता प्राप्त गर्दै गर्दा विभिन्न अवार्ड र सम्मानहरू पाएका छन् ।
काठमाडौं : सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मिस एण्ड मिसेस युनिभर्सल २०७८’ भदौमा हुने भएको छ । स्पार्कल इन्टरटेनमेन्टको आयोजनामा हुन लागेको यो प्रतियागिताको यतिवेला अडिसन भइरहेको छ । पहिलो अडिसन बाट १५ जना मिस र १५ जना मिसेस गरी ३० जना छनोट भएका छन् ।
मिस र मिसेसहरूमा रहेको प्रतिभा निखार्दै उनीहरूको उज्ज्वल भबिस्य निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको स्पार्कल इन्टरटेनमेन्ट अध्यक्ष अम्बिका अर्यालले बताइन् । प्रतियोगिताको अन्तिमस्पर्धा भदौ १९ गते राष्ट्रिय नाचघरमा जमलमा आयोजना हुँदैछ ।
बाजेको सेकुवा स्पोन्सर रहेको प्रतियोगिताको कोओडिनेटर नितु श्रेष्ठ छिन् । विवाह अघि र विवाह पछि पनि करियरलाई थप मद्दत पुग्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता गर्न लागेको स्पार्कलका उपाध्यक्ष सुनिला केसी र कोषाध्यक्ष प्रमिला प्रधानंगले बताइन् ।
अश्विनीकान्त झा अफिसियल कोरियोग्राफर रहेको यो प्रतियोगिताको मुख्य जजमा रुवी राणा र प्रियारानी रहेकी छन् ।
प्रतियोगिताका विजेतालाई नगद पुरस्कारसहित विभिन्न गिफ्ट ह्यापर प्रदान गरिनुका साथै म्युजिक भिडियोमा अभिनयको अवसर प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ । यस्तै विजेता कोरियन ब्राडको द सीम नेपालको एम्बेसडर बन्ने छन् । त्यस्तै फर्स्ट रनर अप तथा सेकेन्ड रनर अपका विजेताले पनि आकर्षक पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।
हास्य कलाकार खनाल ‘शिखर टेलिभिजन’को अध्यक्षमा चयन
काठमाडौं : हास्य विधामा लोकप्रिय बन्न सफल हास्य कलाकार शेखर खनाल प्रसारणमा आउने अन्तिम तयारीमा रहेको ‘शिखर टेलिभिजन’को अध्यक्ष पदमा चयन भएका छन् । खनाललाई टेलिभिजनको बोर्ड बैठकले अध्यक्षमा चयन गरेको हो ।
विगत लामो समयदेखि खनाल नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्येक शनिबार बिहान ९ बजे प्रसारण हुँदैं आइरहेको पुर्वाधार विकाससँग सम्बन्धी एक मात्र टेलिभिजन कार्यक्रम ‘विकास र वहस’का प्रस्तोता हुनुका साथै निर्माता एवं निर्देशक समेत रहँदै आएका छन् । उनले विगतदेखि नै रंगमञ्च र चलचित्र निर्देशक एवं हास्यव्यंग्यको क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका निभाउँदै आइरहेका छन् ।
अध्यक्षको जिम्मेवारी ग्रहण गर्दै उनले भने, ‘नयाँ ढंग र सोचका साथ टेलिभिजन मार्फत पत्रकारितामा छिर्न लागेको हुँ यसमा सबैको साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’ उनी एक समय निकै चर्चामा आएको हास्य टेलिश्रृंखला ‘झ्यांईंकुटी’मा भुइकटरको उपनामबाट निकै चर्चामा रहेका थिए ।
लामो समयदेखि टेलिभिजन च्यानलहरुमा हास्यव्यंग्य लगायत इन्टरटेनमेन्टसँग सम्बन्धित थुप्रै टेलिभिजन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेका खनाललाई शिखर टेलिभिजनको अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी दिइएको हो । शिखर टेलिभिजन पूर्णरुपले इन्टरटेनमेन्ट च्यानलको रुपमा रहने छ ।